Lapan’i Tsimbazaza: miketrika hamerina kilasy ireo depiote teo aloha | NewsMada
Lapan’i Tsimbazaza: miketrika hamerina kilasy ireo depiote teo aloha
Par Taratra sur 22/03/2019
Maromaro ireo depiote teo aloha mbola nirotsaka hofidina, miketrika ny hiverina ho eny amin’ny lapan’i Tsimbazaza.
Ao ireo mbola natolotry ny antokony. Anisan’ny mbola nametrahan’ny TGV/Mapar fitokisana ary hamerina kilasy eny Tsimbazaza ohatra ry Razanamahasoa Christine any Ambatofinandrahana, Nina ao Mahajanga, Jocelyne Maxime any Antsiranana. Niova distrika fa mbola anisany ny minisitra am-perinasa, i Naharimamy Irma… Tahaka izany koa ny an’ny Tim. Voatazona mbola kandidà etsy amin’ny boriborintany I, ny Me Razafimanantsoa Hanitra, Rastany eny amin’ny faharoa, Rakotomanjato Rodin any Arivonimamo…
Natosika ho kandidà tsy miankina ireo H VM…
Eo koa ireo voailika na tsy naharesy lahatra ny mpitarika ka nikisaka nirotsaka any amin’ny mahaleo tena. Nirotsaka amin’ny tsy miankina ao Toamasina I, i Tody Arnaud avy amin’ny TGV/Mapar teo aloha na koa ny depiote Tim, Randriamandimbisoa Felix, boriborintany fahefatra, niofo ho mahaleo tena. Misy koa anefa ireo tena tsy nilatsaka amin’ny anaran’ny antoko fa natosika mihitsy hanao tsy miankina noho ny tsy faharesena lahatra fa hanahirana manoloana ny safidim-bahoaka. Anisan’ny nanao izany ny antoko HVM. Kandidà tsy miankina ohatra ny depiote teo aloha, Milavonjy Philobert any Ambovombe Androy.
Vitsy tanteraka ireo vehivavy kandidà depiote
Tahaka izany koa ireo minisitra HVM teo aloha nirotsaka amin’ny mahaleo tena. Maromaro izy ireo. Anisan’izany Rasoazananera Marie Monique any Ambositra, Andriamosarisoa Jean Anicet ao Ambalavao, Andriamanarivo Lalatiana any Faratsiho, Ralava Bebomarimisa any Manakara…Anisan’ny naha maro aniasa ieo kandidà tsy miankina amin’ity fifidianana ity izany tsy maintsy fiovana loko izany na koa noho ny nanilihan’ny antoko azy ireny, tsy ho kandidà.
Etsy andaniny, ambany tanteraka ny taham-pandraisan’anjaran’ny vehivavy amin’ny firotsahana ho kandidà depiote. 15% monja izany raha 85% kosa ireo kandidà lehilahy. Mbola lavitra ezaka ny resaka mira lenta na koa ny fidiran’ny vehivavy an-tsehatra manoloana ny safidim-bahoaka.
Hifampitady amin’ny Tim sy TGV ireo tsy miankina
Araka izany, hifampitana amin’ny kandidà tsy miankina izany ny kandidà natolotry ny antoko Tim/K25, tarihin’ny filohany, Ravalomanana sy ny IRD miara-dia amin’ny filoha Rajoelina amin’ity indray mandeha ity. Ho hita eo ny safidim-bahoaka na hiandany amin’ny antoko politika na hirona any amin’ireo efa tao anaty antoko nefa nanao mahaelo tena na koa ireo nirotsaka amin’ny tsy miankina tanteraka mihitsy.